चितवनबाट हेटौंडा पुगेकी युवतीमा कोरोना संक्रमण – Khabar Silo
चितवनबाट हेटौंडा पुगेकी युवतीमा कोरोना संक्रमण
हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१ निवासी २५ वर्षीया युवतीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ।
हेटौंडास्थित किटजन्य अनुसन्धान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणले उनमा संक्रमण पुष्टि गरेको हो।
संक्रमित युवती गत जेठ ९ गते चितवनको भरतपुरबाट हेटौंडा पुगेकी जिल्ला आइसोलेसन वार्डका इन्चार्ज भोला चौलागाईंले जानकारी दिए।
उनले बाहिर जिल्लाबाट आउनेहरूको परीक्षण गर्ने क्रममा युवतीमा संक्रमण देखिएको बताए।
अहिले युवतीलाई चितवनस्थित भरतपुरको कोरोना अस्पताल पठाइएको छ। युवतीमा कुनै पनि लक्षण नभएको र स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको चौलागाईंले बताए।
युवतीले आफू लकडाउनको बेलादेखि नै कोठामा बसेको जानकारी गराएकी छिन्।
उनी चितवनमा पार्ट-टाइम कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्छिन्।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सय ८३ पुगेको छ।
मंगलबार मात्र एकैदिन १ सय १ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। यो अहिलेसम्मकै उच्च वृद्दिदर हो।
विद्युतीय सवारीको करमा सरकारले किन लियो ब्याक गियर ?
१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाएपछि चौतर्फी विरोध भयो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको भनेर आलोचना भइरहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए । गत जेठ १६ गते बजेटबारे स्पष्ट गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए, […]
‘कृपया अब हामी बुद्ध एयरको उडान नं। ६०१ बाट पोखरा प्रस्थान गर्दैछौँ । बाह्र हजार फिटको उचाइबाट २५ मिनेटको यात्रापछि पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुनेछौँ । यात्रु महानुभावहरु ध्यानदिनुहोला १ “कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षित रहनका लागि हवाई यात्रामा पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा निर्देशन” कृपया आफ्नो सिटबेल्ट बाँधिदिनु होला, यात्रा अवधिभर मास्क र फेससिट लगाउनुहोला । उडानका बेला […]
कस्तो छ चीनको नयाँ आर्थिक रणनीति ?